Siyaasadda rarka - Wevino.store
Gaarsiinta & Soo noqoshada
Waxaan dooneynaa inaan xaqiijino dhamaan macaamiisheenna in aan WELI gaarsiinayno waana sii wadaynaa inaan sii wadno illaa inta si kale looga sheegayo. Sikastaba waxaan kaa codsaneynaa inaad nalashaqeysay inta lagu gudajiray waqtigan maadaama aan kashaqeyneyno koox yareyneysa, taasoo la micno ah inay dib udhac ku imaaneyso amarada kuu imaanayo.
Amarada la helo 1-da duhurnimo ee maalmaha shaqada waxaa loo diraa maalinta xigta ku xiran helitaanka keydka. Waqtiga gudbinta ee caadiga ah waa 72-96 saacadood - mar labaad, waa haddii shayga uu keyd ku jiro oo ay kuxirantahay xulashada adeeggaaga bixinta.
Fadlan la soco inaanan quudhsanayn amarrada maalmaha fasaxa ama maalmaha fasaxa bangiyada, waraaqahayaashuna ma keenaan maalmaha Axadda ama Ciidaha Bangiga. Amarada la helo inta lagu jiro muddadan waxaa lagu shaqeynayaa maalinta shaqada ee xigta.
Badeecadaha tirada badan ee aan iibinay awgood ayaan mararka qaarkood u helnaa badeecad aan oolin taasoo macnaheedu yahay waxaan u baahanahay inaan dib ugala soo wareegno alaab keenayaasha. Markan ayaa amarada qaar qaadan karaan 3-7 maalmood oo shaqo si loo fuliyo. Xaaladaha badankood waxaan ku heli karnaa keyd dheeraad ah 3 maalmood oo shaqo gudahood, waa haddii keydku diyaar yahay. Haddii alaab-qeybiyahayagu uusan awoodin inuu dib noogu soo shubo waxaad joojin kartaa amarkaaga wakhti kasta oo waxaad ku heli kartaa lacag-celin buuxda "hal guji".
3-4 maalmood oo shaqo - 9.8 EUR amarkiiba inta badan waddamada EU.
Waxaan isticmaalnaa UPS iyo TNT Express maaddaama oo aan nahay warqaadahayaga waaweyn, kuwaas oo lagu kalsoon yahay oo si fiican u aasaasay Adduunka oo dhan. Iyaga si wanaagsan ayaa loo maareeyaa oo waxay u shaqeeyaan si aad loogu kalsoonaan karo, iyagoo ku faanaya adeeggooda macaamiisha. Waxay ku shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya shaqaale joogto ah oo deegaanka ah halkii ay ka ahaan lahaayeen wadayaasha wakaaladda waxayna u qaataan qaab shaqsi ahaaneed waxyaabaha ay keenayaan. Waxay sidoo kale isticmaalaan teknolojiyada ugu dambeeya ee raadraaca si loo hubiyo inaad gacanta ugu badan ku leedahay bixinta baakadkaaga.
Fadlan xusuusnow, Warqadaha (Couriers) waa isku xiraha adiga iyo annaga innaguna ma lihin xiriiriyahaas, si toos ahna uma maamuli karno waxa ka dhex dhaca. Haddii dhibaato timaado, waxaan ku dadaalaynaa sida ugu fiican inaan wax uga qabano dhibaatooyinkaas adiga halka aan kari karno waxaanan si joogto ah dib ugu eegeynaa adeegga aan ka helayno asxaabteena aan ku kalsoon nahay oo aan dabagalno arrimaha ku habboon.
Alaabada waxaa kaliya u saxiixi kara dadka ka weyn 18 sano. Warqadahayagu waxay codsan karaan aqoonsi haddii aad ka yar tahay 18 sano waana diidi karaan inay keenaan haddii aqoonsi ku habboon aan la bixin karin.
Waxaad dooran kartaa in amarkaaga laguugu geeyo cinwaan aan ahayn cinwaanka biilashaada, sida goobtaada shaqada ama saaxiib ama qaraabo. Si fudud ku dar cinwaan kale oo rar ah markaad dalbanayso amarkaaga.
Hadaad hadiyad diraysid, waxaad ku dari kartaa kaarka hadiyada amarkaaga iyada oo aan lagaarsiin qarash dheeraad ah, fadlan hubi inaad noogu sheegto qoraalada ku yaal checkout. Annagu ma gelin doonno nooc ka mid ah warqadaha qaansheegta oo hadiyado wata, tani waxay toos ugu imaan doontaa emaylkaaga.
Haddii uusan jirin qof la kulmi kara waraaqaha, warqad-qaadaha ayaa ka tagi doona kaar uu ku sheegayo inay ahaan jireen. Haddii kale, waxaad u oggolaan kartaa warqadda dirista inay amarka ku dhaafto meel cayiman. Waxaa jira a qoraallada gaarsiinta qaybta dukaamaysiga checkout halkaas oo tilmaamaha gudbinta looga tagi karo haddii adiga ama qaybta qaataha ah ay maqnaadaan.
Waad eegi kartaa horumarka amarkaaga qaasatan adoo adeegsanaya lambarka raadraaca ee lagu siiyay emaylka 'Order Shipped' ee aad heli doonto. Marka amarkaaga laga soo diro bakhaarkeena waxaan kuu soo diri doonaa Email Diritaan leh xiriiriye raad raac si aad ula socon karto safarkiisa.
Burburka ama Burburka
Waxaan taxaddar gaar ah u leenahay si loo hubiyo in alaabtaadu ay si ammaan ah oo ammaan ah u buuxsamaan, iyadoo la adeegsanayo baakado la oggolaaday laakiin marmar iyo nasiib-darro, jabno ama dhaawacyo qaarkood ayaa dhici kara.
Waxyeello kasta oo soo gaadha amarka oo dhacay intii lagu jiray safarka transit waa in sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah noogu soo wargalisaa marka alaabada la helo. Haddii uu jiro waxyeello muuqata oo la xiriirta alaabada la keenayo, tan waa in lagu wargeliyaa warqadda.
Dhammaan alaabooyinka waa in la baaraa waana in nala ogeysiiyaa wixii jabaya isla markiiba iyo laba maalmood gudahood marka la keeno ugu dambaynta. Waxaan kaa codsan karnaa inaad noo soo dirto sawirrada waxyeelada ka hor intaan tallaabo dheeri ah la qaadin.